Ka Hortegida Xayeysiinta Gudbinta ee lagu sharraxay Khabiirka Ciraaq
Shaki la'aan, spam gudbinta waxay noqotay dhibaato weyn. Haddii aanad aqoon u lahayn ereygan, aan kuu sheego in ay tahay nooc ka mid ah taraafikada qatarta oo dhaawici karta rikoorkaaga bogga natiijooyinka raadinta . Gawaaridan been abuurka ah ayaa loogu talagalay inay hagaajiso darajada internetka 'hackers', halka ay ku sii mashquulaan si ay hoos ugu dhigaan internetka. Heerka cirifka ayaa mar walba sarreeya oo leh spam gudbinta, iyo tirakoobka bogga ee Google Analytics aan waligaa la muujin sida aadanuhu u booqanayo goobtaada laakiin qalloocan.
Julia Vashneva, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Sartaal , wuxuu ka hadlayaa xalal ficillo ah oo ku saabsan arrintan
Maxay tahay sababta Spam Spam dhibaato weyn?
Ma aha khalad in la yiraahdo spam u gudbinta waa dhibaato weyn, iyo in la galiyo falanqaynta boggaaga iyada oo la adeegsanayo xog aan macno lahayn. Waa wakhti dhab ah oo qashinka ah, waana inaad maqashay boggaga internetka - mã¶bellift mieten zã¼rich. Waa arrin niyadjab leh si loo dhiso goob, u samee xeeladeeda raadinta raadinta, oo wali si aad u hesho jagooyin sabool ah ee natiijooyinka raadinta raadinta
Had iyo jeer waa dhibaato si aad uga takhalustid spam gudbinta, laakiin waxa kaliya ee aad ku sameyn kartid meeshii aad ku sameysey shaashooyin Google Analytics..Adiga oo abuuraya shaandhooyin, waxaad ku dari kartaa cinwaanka IP-da ee spam iyo ka takhalusi spameriyeyaasha gudbinta sida shabakadaha internet-ka ah. Dhamaan tani waxay ugu dambeyntii hagaajin doontaa liisaska boggaaga. Samee filatero badan intii suurtagal ah si aad u badbaadiso goobtaada si ay u burburiso internetka. Iyada oo la adeegsanayo shaandhada, waxaad ka hortagi kartaa spam u gudbinta ah inaad waxyeelo u geysato goobta internetka oo aad horjoogsatid cinwaanada IP oo aad dhibaato ka qabto.
Joojinta spam gudbinta
Haddii aad rabto inaad joojiso spam gudbinta, waxa ugu horreeya ee aad sameyneyso waa inaad sameysid shaandheyn. Haddii tani aysan kuu shaqeynin, markaa waxaad ku dhejin kartaa codad gaar ah faylasha faylasha .htaccess. Xeerarkan waxaa lagu bixiyaa xisaabta Google Analytics, waana inaad iska diiwaangelisid goobtaada si aad u heshid nuqullo noocaan ah.
Farsamada saddexaad waa istiraatijiyad. Dareemaha ayaa ku celiya taraafigga ilaha ayaga, waxaadna ka hortagi kartaa soo galitaanka hits yar. Khabiiradu waxay sheegteen in qaabkani yahay mid lagu kalsoonaan karo maadaama ay ka hortagi karto muuqaalka bots iyo fayraskaaga goobtaada. Waa inaad sameysid khariidado ka hor inta aanad kicin doorashadan koontadaada.
Wordpress waxay bixisaa adeegsigeeda waxyaabo fara badan oo ka hortagi kara imaatinka spam iyo gaadiidka been-abuurka ah ee goobtaada. Website-yada ugu xun ee loogu talagalay badhanka websaydhka ee websaydhka ah. Waa dariiqa lagu burburin karo boggooda internetka. Hase yeeshee, xireyaasha xayiraadaha ayaa hadda ku jira dalab aad u sareeya aduunka oo dhan. Waxaa laga heli karaa WordPress waxaana lagu rakibin karaa loona hawlgelin karaa daqiiqado gudahood. Waa inaad doorataa plugin isku xiran oo aad ku xiran tahay si aad u hagaajiso aragtida iyo kalsoonaanta bogga internetka ee internetka.